kudzidziswa » Smart TV » Ungabatanidza sei nharembozha kuTV
Kubatanidza nharembozha kuTV hakuna kuoma sezvazvinoratidzika: nhasi tine huwandu hwakanaka hwenzira dzinotitendera kugovera mavhidhiyo, mafoto kana kunyange skrini yese yenharembozha yako paTV yako, zvisinei kuti i iPhone kana Android.
Kuziva ipapo kuti zviri nyore sei kubatanidza nharembozha kuTV, tichaona nzira dzese dzekubatanidza serura kuTV, kungave netambo, kuburikidza neWi-Fi, zvakananga kana kuburikidza nemidziyo.
Ungabatanidza sei iPhone kana iPad kuTV neApple TV
Iko hakuna akawanda sarudzo: kutaura zvazviri, nzira chete yekutarisa skrini ye iPhone kana iPad (kana kunyange macOS) paterevhizheni iri kuburikidza neApple TV, sezvo zvigadzirwa zvekambani iyi zvinoda proprietary AirPlay protocol kuita kudaro. pakati peGadget neterevhizheni.
Iwe unofanirwa kutanga waziva iyo Screen Mirroring icon kana kushandisa iyo AirPlay sarudzo yekutarisa girazi muIOS Control Center uye ziva kuti ndeipi Apple TV iyo zvirimo inoda kufambiswa uye nekusimbiswa.
Nekudaro, zvakare zvinogoneka kubatanidza iOS nharembozha kuTV uchishandisa inotevera nzira, kanenge yekutamba mavhidhiyo uye mafoto pachiratidziro chikuru.
Batanidza nhare kuTV kuburikidza neGoogle Cast (Chromecast)
Varidzi vemidziyo yeAroid vane dzimwe sarudzo dzekubatanidza midziyo yavo kuTV kupfuura vashandisi ve iPhone. Imwe yadzo, yakakurumbira, ndeye kushandisa proprietary protocol yeGoogle Cast, iyo, kunyangwe iri muridzi seAirPlay, inowanikwa muChromecast uye mumabhokisi ekumusoro kubva kune vakasiyana vagadziri.
NeChromecast kana bhokisi rinoenderana rakaiswa uye rakagadziriswa, mudziyo weAroid wakabatana kune imwecheteyo Wi-Fi network icharatidza mumapurogiramu anoenderana (Netflix, Spotify, YouTube, etc.) chiratidzo chekushambadzira kuburikidza neGoogle Cast; Kufambisa mavhidhiyo, nziyo, uye mafoto akachengetwa, shandisa iyo Google Photos app (Android, iOS), sarudza zvirimo, uye sarudza yekushambadzira sarudzo.
Nekudaro, iyo Screen Mirroring sarudzo inowanikwa muGoogle Home app (Android, iOS) haienderane ne iPhone kana iPad, uye iGoogle-chete chimiro.
Nzira yekubatanidza serura kuTV uchishandisa Miracast
Kana iwe usina inoenderana Google Cast mudziyo, zvinokwanisika kukanda zvirimo kubva Android mudziyo wako terevhizheni kuburikidza Miracast Protocol, aripo anenge ose terevhizheni anowanikwa pamusika, asi asinganyanyi kushandiswa.
Yakagadzirwa neWi-Fi Alliance, Miracast chiyero chekufambisa 5.1 Surround Sound quality audio, vhidhiyo kusvika 1080p, uye mifananidzo pasina kudiwa kwetambo kana Wi-Fi yekubatanidza.
Kuti uite izvi, inoshandisa inongedzo-kune-inongedzo pakati peTV uye smartphone / piritsi, saka zvese zvishandiso zvinofanirwa kuenderana.
Nezvese zvagadzirira, ingo shandisa app inoenderana uye woyerera wakananga kubva ku-smartphone kuenda kuTV, pasina kukanganisa kana kutsamira paWi-Fi kana Bluetooth.
MaTV anotsigira tekinoroji anogona kuipa mazita akasiyana: Samsung, semuenzaniso, inoshandisa zita rekuti Screen Mirroring; Sony inoidana kuti Miracast Screen Mirroring; LG uye Philips vanongoidaidza kuti Miracast.
Mimwe michina inoenderana ndeiyi inotevera:
Midziyo inoshandisa Windows 8.1 uye Windows 10
Midziyo inoshandisa Windows Phone 8.1 uye Windows 10 Mobile
Zvishandiso zveAroid kutanga ne4.2 Jelly Bean, kunze (semuenzaniso, Motorola yakadzima chimiro mukuburitswa kwayo kwazvino)
Zvishandiso zvinoshandisa fireOS, senge Amazon Fire TV Stick
Mimwe michina yekutepfenyura yakafanana neChromecast, yakadai seMicrosoft Wireless Adapter uye iyo Anycast imwe nzira
Ungabatanidza sei nhare kuTV uchishandisa HDMI tambo
Zvinogoneka zvakare kubatanidza nharembozha kuTV uchishandisa tambo, uye kune mhando mbiri dzinoenderana, MHL neSlimPort. Yekutanga inoshandisa VESA pateni, saka inowirirana nehuwandu hukuru hwekubatanidza: kuwedzera kune HDMI, inotsigira DisplayPort, DVI uye kunyange VGA; maadapter echipiri anoshanda chete neHDMI ports uye kazhinji anoda simba rekunze.
Zvakanakira zvekubatanidza waya ndezvekuti vane rutsigiro rwezvisarudzo kubva pa4K kusvika 8K, pamwe ne7.1 Surround Sound audio, ine Chokwadi HD uye DTS-HD. Ose ari maviri uye mamwe anowirirana nehuwandu hukuru hweTV, mahwendefa uye smartphones.
Tambo yeMHL, ine HDMI yekubatanidza paTV, microUSB yesmartphone (kana mudziyo wako uine USB-C port, adapta inodiwa) inogona kuwanikwa mumambure ezvitoro zvepamhepo nemitengo inokwanisika.
Iyo SlimPort tambo isingawanzo, nekuti haina kutsvakwa nevatengi uye inogona kuraira mutengo wakakwira.
Ungabatanidza sei nharembozha kuTV uchishandisa USB tambo
Pakupedzisira, sezvo Android smartphone ichiri yekunze yekuchengetedza mudziyo, zvinokwanisika kubatanidza mbozhanhare kuTV netambo ye USB, uye kuratidza mafoto ako zvakananga pachiratidziro chikuru.
Ingoyeuka zvinotevera: nzira iyi haishande nemafaira, saka hazvibviri kutamba mavhidhiyo akachengetwa panharembozha. Kunyangwe zvakanyanya kushomeka, ndiyo inonyanya kushanda nzira yekuratidza shamwari dzako mafoto ako achangoburwa.
Meso May Signal Signs of Autism uye ADHD: Kudzidza
2 nyaya nyowani dzehutachiona hunouraya dzinoonekwazve muSpain mushure memakore makumi maviri
4K resolution: ziva zvakanakira uye kana zvakakodzera